ဗေဒင် လက္ခဏာ Archives - Latest Myanmar News
အိပ်မက် မကောင်းတို့ မြင်မက်လျှင်ဘေး အန္တရာယ်များ ကင်းဝေးလွတ်မြောက်စေမည့် နည်းလမ်းလေး
February 26, 2020 Latest Myanmar News 0
အိပ်မက်မကောင်းအဝေးဆုံးရှောင်တော့ တစ်ခါတရံမှာလူတိုင်းလိုလို အိပ်မက်ဆိုးတွေမက်ဖူးတတ်ကြပါတယ်။ စိတ်စွဲလို့မက်တာ၊သွေးလေမညီညွတ်လို့မက်တာမျိုးဆိုရင်တော့အကျိုးအပြစ်မပေးတတ်ပါဘူး။ အဓိပ္ပါယ် မဲ့အိပ်မက်တွေဆိုရင်ပြဿနာမရှိပေမယ့် နိမိတ် ပြအိပ်မက်ဆိုးတွေဆိုရင်တော့ မကောင်းတာလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့လို အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုခုကြုံရပြီဆိုတာနဲ့ တရော်ကင်ပွန်းနဲ့ခေါင်းဆေးတာတို့၊အိပ်ယာပြောင်းအိပ်တာတို့၊ပရိတ်ရွတ်တာတို့ကတော့လူတိုင်းလိုလိုနားလည်ပြီးသားလုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်ပေမယ့် ယခုဖော်ပြမယ့်နည်းကတော့ ရှေးဟောင်းကျမ်းထဲကရှေး လူကြီးသူမတွေ လုပ်ကြတဲ့ အိပ်မက်ဆိုး ပြေပျောက်စေနည်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူလက်တွေ့စမ်းသပ်အသုံးပြုကြည့််တဲ့အခါမှာလည်း ထူးခြားအစွမ်းထက်ပြီးနိမိတ်ဆိုးအန္တရာယ်ကင်းသွားတာတွေကို အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ရှိရလို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုခုမြင်မက်ပြီဆိုရင် မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ သစ်ငုတ်တိုတစ်ခုကိုရှာလိုက်ပါ။ […]
စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး အတိုက်အခိုက်ကင်းအောင် ပြုလုပ်နည်း
ရွှေပေါ်ကျွန်းဆရာတော် ကြီး ချီးမြှင့််သော အစွမ်းထက်သော ကျောက်ခဲကျင့်စဉ် ဤ အစွမ်းထက်သော ကျောက်ခဲကျင့်စဉ် သည် သီးသန့် ချီးမြှင့်ခဲ့သော ကျင့်စဉ်ထူး ဖြစ်သည်။လူသ်ိနည်း ၍ ရှားပါးသော ကျင့်စဉ် ဖြစ်သည်။အထူးသဖြင့် ဤကျင့်စဉ်မှာ လွယ်ကူပြီး ထိရောက်မှု့ရှိသည်။ ထူးခြားပြီး လွယ်ကူသည့် ကျင့်စဉ် ဖြစ် သဖြင့် […]
လက်ထဲ ငွေမပြတ်စေသော အဆောင်
February 24, 2020 Latest Myanmar News 0
ငွေမပြတ်စေသော အဆောင် မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျား …. မိတ်ဆွေများ အလုပ်အကိုင် အဆင်မပြေ ဖြစ်၍သော်လည်းကောင်း, အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထွက်ငွေများ၍ ငွေပြတ်နေသော်လည်းကောင်း, ပိုက်ဆံမရှိဘူး ဆိုပြီး ခဏခဏညည်းနေရသော်လည်းကောင်း, ဒီလိုလက်ထဲငွေပြတ်တဲ့အခြေနေများကြုံတွေ့နေရရင် လက်ထဲအမြဲဝင်ငွေတည်မြဲစေမည့် ငွေမပြတ်မည့် အဆောင်လေးတစ်ခု ပညာဒါနပြုလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား…… လာဘ်တွေပွင့်ပြီး ငွေမပြတ်သောအဆောင်ဖြစ်ပါတယ် ဇလပ်ဖြူပန်းပင်၏အမြစ်လက်နှစ်ဆစ်ခန့် ကို […]
တပေါင်းလ တစ်လစာ စီးပွားတက် လာဒ်ရွှင်ယတြာ
February 22, 2020 Latest Myanmar News 0
တပေါင်းလ အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ တပေါင်းလဆန်း(၁)ရက်နေ့(23.2.2020)မှ တပေါင်းလကွယ်နေ့(23.3.2020)အထိ တစ်လတာလုံး မြတ်စွာဘုရားရှင်အား အုန်းထန်းလျက် ကပ်လှူရမည်။ ဘုရား ဂုဏ်တော်(၉)ပါး ဂါထာအား ပုတီးစိပ်ရမည်။ တပေါင်းလ တစ်လတာအတွင်း ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ကျန်းမာ ချမ်းသာရပါလို၏။မိမိလိုရာဆုတောင်းနိုင်သည်။ မည်သည့်နေ့နံသားမဆိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါကြောင်း။ ဤယတြာအစီအရင်သည် အလွန်အစွမ်းထက်ထိရောက် သောကြောင့် ယုံယုံကြည်ကြည်လုပ်မည်ဆိုပါက စီးပွားလာဘ်လာဘပွင့်လန်းပြီးမည်သည့်အခက်အခဲများ […]
၇ရက်သားသမီး တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
February 20, 2020 Latest Myanmar News 0
၇ရက်သားသမီးများ တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း (20.2.2020 မှ 26.2.2020 အထိ) တနင်္ဂနွေ စီးပွားရေးတွင် ဆရာကောင်းတိုိ့၏ ကူညီမှုကို အပြည့်အဝရရှိမည်။ ခြံ၊ မြေများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အကျိုးအမြတ်ရမည်။. လခစားဝန်ထမ်းလျှောက်ထားသူများ အခွင့်ကောင်းများရလာမည်။ နေရာကောင်း၊ အလုပ်ကောင်းများ ရရှိမည်။ လုပ်ငန်း နှစ်မျိုးကို ပြိုင်တူလုပ်ဖြစ်မည်။ စကားအပြောအဆိုများ မှားယွင်မည်။ စိတ်လောကြီးစွာ […]
February 19, 2020 Latest Myanmar News 0
ရာသီဖွားများ ရဲ့စိတ်အခြေအနေ ရာသီခွင်ဖွားများ၏ ထူးခြားချက်များ ၁ . မိဿရာသီ(Aries) : မတ် ၂၁ ရက်မှ ဧပြီ ၂၀ ရက်အတွင်း မွေးဖွားသူများ သွေးနည်းနည်းဆူတယ်၊ခပ်ပြတ်ပြတ်ပဲ၊ဆိုလိုရင်းကပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ခပ်သွက်သွက်သမားပေါ့။ တန်းမစီချင်သူတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန် လုပ်ချင်ပြီးချင်သူ။ ဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်မယူပဲ မြန်မြန်ပြီးရမှ ကျေနပ်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ […]
ဂုဏ်တော်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းကြောင့် ရရှိသော အကျိုး
ဘုရားဂုဏ်တော် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းအကျိုး ပုထုဇဉ်လူသားအပေါင်းတို့သည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ စား၊ ဝတ်၊ နေ၊ ရေး အရေးကြီးသုံးပါးကို ဆောင်ရွက်နေကြ၏။ ဉာဏလုပ်သားများကလည်း ဉာဏအလျှောက် ကာယလုပ်သားများကလည်း ကာယအလျှောက် လုပ်ကိုင်နေထိုင်ကြရ၏။ ထိုအလုပ်ခွင်တွင် ကာယလုပ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဉာဏလုပ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကုသိုလ်စိတ်ရိုင်းများ မဝင်စေရန် ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်တစ်ခုခုကို စိတ်ထဲမှာ ပွားနေလျှင် ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီး အလွန်အကျိုးထူးများရရှိပါ၏။ […]
ထီပေါက်ချင်သူများအတွက် အက္ခရာအဓိဋ္ဌာန်နှင့် ဂဏန်းဖြင့်် မြတ်စွာဘုရားကို ပူဇော်ခြင်း
February 18, 2020 Latest Myanmar News 0
ထီကံ ကောင်းစေ ဖို့ အဓိဋ္ဌာန် ပုတီးစိပ်ကြစို့ လူတိုင်း ထီပေါက် ချင်ကြပါတယ် ဒါပေ့မယ့်် ထီဆိုတာ လူတိုင်း ပေါက်တာ မဟုက် သူကံဇာ တာ နည့် ကံပေါ် မူတည် ပြီး ပေါက်ကြတယ် အဲကံဇာ အပေါ်မှာပဲ ထီဆု ကြီး ထီ […]
မွေးဖွားသည့် အချိန်မှပြောသော သင့်အကြောင်း
February 17, 2020 Latest Myanmar News 0
ညသန်းကောင်ကျော် တွင်မွေးသူများ ညမွန်း တည့်(၁၂)နာရီကျော် ၍ တစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီ စသည့် အချိန် ပတ်ဝန်းကျင် တွင်မွေးဖွား သူများဖြစ်လျှင် ဘ၀တစ် လျှောက်လုံး တွင် ဆွေမျိုး ညီအစ် ကိုမောင်နှမ များနှင့် နီးစပ် ဆက်သွယ်ရသော အကျိုး ကို ပေးကို ရလိမ့်မည်။ […]
အခက်အခဲအားလုံးကို အဆင်ပြေပြေ နှင့် ပြီးသွားစေဖို့ ယတြာ
February 16, 2020 Latest Myanmar News 0
လိုအင် ဆန္ဒ ပြည့်ဝယတြာအစီ အရင် တစ်ခါ တရံ အမှတ်မထင် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ လာရတက်သည် ထိုအခါ များစွာ ဒုက္ခ ရောက်ကြရသည် တချို့ အခက်အခဲတွေက. မပြေလည် နိူင် ရက်မှလ လမှ နှစ်ထိပင် ကြာ၍ ပိုပိုဆိုးလာတဲ့ အခက် အခဲ […]